IParadesi yaseTropiki eShannas Bay, kwisiqithi saseCat - I-Airbnb
IParadesi yaseTropiki eShannas Bay, kwisiqithi saseCat
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguSherri
IParadesi yaseTropiki ibekwe elunxwemeni oluzinze kakhulu kumntla weCat Island eyaziwa ngokuba yiShannas Bay. Ukuba ujonge indawo yokuhlala, iilwandle ezintle, ukuntywila emanzini okugqibeleleyo, ukutshona kwelanga okumangalisayo, kunye nokujonga iinkwenkwezi okumangalisayo ke le yindawo yakho. Indlu ihleli kufutshane namanzi kangangokuba uya kulala kobona buthongo bubalaseleyo bobomi bakho umamele amaza angena.
IParadesi yaseTropiki yaziwa njengeePods ezizizindlu zangasese ezidityanisiweyo zonke ezidityaniswe kunye ngokusonga ngokuhombisa. Indawo yokuhlala ephambili kunye nekhitshi sisakhiwo esinye kumbindi wegumbi lokulala elikhulu eli-2 kwicala ngalinye. Indlu isandula ukwenza ukulungiswa okuye kwahlaziya kwaye yaqaqambisa ipropathi egqibeleleyo kwindawo efanelekileyo. Igumbi lokulala elikhulu linebhedi enkulu kwaye igumbi leendwendwe lineebhedi ezi-2 zokumkanikazi. Igumbi ngalinye lokulala linebhafu yabucala ebekwe emva kwegumbi lokulala elineshawa yomoya evulekileyo. Kukho igumbi lokuhlamba impahla elisemva kwegumbi lokulala leendwendwe.
IParadesi yaseTropiki ibekwe ezantsi elunxwemeni ukusuka eShannas Cove Resort kunye nendawo yokutyela. Yindawo yokutyela yeenkwenkwezi ezi-5 kodwa ugcino luyafuneka kwisidlo sangokuhlwa. Zivulwa yonke imihla isidlo sakusasa kunye nesasemini.
Indlu ixhotyiswe ngokupheleleyo ukupheka ekhaya ukuba kunokwenzeka ukuba ubambe iintlanzi zakho okanye ubaleke ngaphesheya komlobi wendawo onokuba nosuku oluhle.
Unokuzizisa ukutya ngokwakho ukuba uzisebenzisele wena, jonga nje into evunyelweyo kwangethuba. Kukho iimarike ezi-4 kwisiqithi apho unokuthenga izinto ezisisiseko kunye nenyama ekhenkcezisiweyo. Isikhephe siza ngoLwesine ukuze okona kuthengiweyo kube ngooLwezihlanu. Kukho ifama ethengisa imveliso yasekuhlaleni ngexesha lonyaka elimalunga neekhilomitha ezili-10.
Singabanikazi bexeshana kwaye sinekhaya elibekwe ezantsi elunxwemeni. Ndifumaneka ngombhalo okanye ngomnxeba nangaliphi na ixesha kwaye ndinoncedo lwasekuhlaleni ukuba luyafuneka.